Mayelana NATHI | Xuzhou Jiamei Glass Products Co., Ltd.
I-Xuzhou Jiamei Glass Products Co, Ltd.iyibhizinisi lokukhiqiza eligxile ekupakisheni izinto zokupakisha zezimonyo ekhaya nakwamanye amazwe, nangamafutha abalulekile nezimonyo zokupakisha ekhaya nakwamanye amazwe. Ithengisa kakhulu futhi ithengise amabhodlela amakha, amabhodlela kawoyela abalulekile, amabhodlela e-aromatherapy, amabhodlela e-cream lotion, njll. Amabhizinisi abhalisiwe avunyelwe yiminyango kahulumeni efanele.
Imikhiqizo esemqoka yile: amabhodlela kawoyela abalulekile ansundu, amabhodlela kawoyela abalulekile aluhlaza, amabhodlela kawoyela abalulekile aluhlaza, amabhodlela kawoyela abalulekile asobala, amabhodlela kawoyela abalulekile amhlophe, amabhodlela eXilin neminye imikhiqizo.
Ukukhiqizwa kokufana kukabhodlela wepulasitiki kawoyela obalulekile + wepulaki yangaphakathi, ibhodlela likawoyela elibalulekile le-aluminium cap, ibhodlela likawoyela elibalulekile le-aluminium anti-theft cap, ibhodlela le-oyela elibalulekile le-plastic head glass dropper, ibhodlela lamafutha elibalulekile ikepisi lekhanda elikhulu, ikepisi le-bakelite, njll.
Izindwangu zamabhodlela kawoyela ezibalulekile ezenzelwe imisebenzi eminingi zingaqinisekisa ukumelana nokubekwa uphawu nokugqwala okuhle kakhulu, kuqinisekiswe ukuthi u-100% kawoyela obalulekile awuvuvuzeki, futhi awuzukuxhuma futhi uqhume.
Inkampani yethu yasungulwa ngo-2016.
Isitifiketi se-CE, ANSI, SGS ne-ISO 9001.
Nikeza ngentengo enhle kakhulu nensizakalo
Ochwepheshe, ukusebenza kahle okuphezulu, iqembu lensizakalo elihle.
I-cap ne-plug drip nayo ingahlinzeka ngezivinini ezahlukahlukene zokuvuza ukuze kuhlangatshezwe ukuconsa kwamafutha abalulekile ahlukahlukene.
Imikhiqizo ewuchungechunge yamabhodlela kawoyela ikhiqizwa ngokwethula umshini wokwakha ingilazi othuthukile. Ikhwalithi yomkhiqizo izinzile, ukuphambuka kwamandla kuncane, inhlanzeko iphezulu, ukushuba kodonga lwamabhodlela nombala kufana, namandla omthelela aphezulu.
Olayini babushelelezi futhi bajwayelekile, futhi amandla engcindezi angaphakathi aphezulu. Umkhiqizo usetshenziselwa ukufakwa kwamakhemikhali amahle njengokugcwaliswa kwamafutha abalulekile, izithasiselo zokudla, izixhumanisi zemithi, kanye nama-reagents amakhemikhali.
Ubuqotho, amandla kanye nekhwalithi yomkhiqizo we-Xuzhou Jiamei Packaging Products Co, Ltd. ibonwe yimboni. Abangani abavela kuzo zonke izizinda bamukelekile ukuvakashela, ukuqondisa nokuxoxisana ngebhizinisi.